Imibono eyothusayo yeAcropolis&Jacuzzi yaseAthene yeNtliziyo eLuxury Loft
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguAnna&Teo
Phuma uye kwithambeka elinamagqabi kwaye ubone iimbono ezimangalisayo zeAcropolis ngaphambi kokuba ungene kwibhafu eshushu. Ukukhanya okuninzi kuzalisa eli gumbi lipholileyo, libonisa imigangatho yokhuni oluqinileyo olulula, izinto zoyilo lwangoku, kunye nefenitshala enesitayile.
“Impilo noKhuseleko-i-sanitizer esekwe etywaleni esekwe etywaleni, - yonke indawo echukunyiswayo yomibini ethambileyo kwaye yosulwe nzima ngezibulali ntsholongwane, - yonke ilinen ihlanjwe ngesicoci sokubulala iintsholongwane.”
“Impilo noKhuseleko-i-sanitizer esekwe etywaleni esekwe etywaleni, - yonke indawo echukunyiswayo yomibini ethambileyo kwaye yosulwe nzima ngezibulali…
- Anna&Teo, umbuki zindwendwe wakho
I-King bed, Izinto ezifakwa efestileni zokwenza indlu ibe mnyama, Umatrasi oyi-pillow-top, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
Ibhedi ekwayisofa, I-Netflix, I-Smart TV, I-Terrace, Izixhobo zomculo
4.95 (iingxelo zokuhlola 189)
Ibekwe kwindawo yasePsirri, indawo yokuhlala isembindini weAthene kunye namanyathelo akude neevenkile ezihamba phambili, iiklabhu zasebusuku eziphithizelayo, kunye neendawo zokutyela ezidlamkileyo. Hamba ngemizuzu eyi-10 ukutyelela i-Acropolis okanye iMyuziyam yeMbali yeYunivesithi yaseAthene.
Umgama ukusuka eAthens International Airport
Umbuki zindwendwe ngu- Anna&Teo
Izimvo eziyi-1 432
Inombolo yomthetho: 00001350536
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R5457